G +, vondrom-piarahamonina, bilaogy ary ... zavatra hafa. | Avy amin'ny Linux
Tsy tsiambaratelo ho an'iza na iza fa ny tambajotra sosialy dia mamono ny vondrom-piarahamonina iray manontolo, andao, hitako ny tetikasa bilaogy sy forum niady tamin'ny zava-misy tsotra fa mora kokoa ny manao zavatra avy amin'ny tamba-jotra sosialy, amin'ny habe izay hitako. orinasa izay aleony mamorona pejy Facebook tsotra na bilaogy Tumblr toy izay mamorona tranokala matihanina tena izy, satria tsotra kokoa ny mitantana, mora (mora kokoa) ary mety hahatratra olona an-tapitrisany manana fampiasam-bola mitovy amin'ny: 0$
Marina izany, teboka iray manohana ireo tambajotra sosialy saingy inona no mitranga rehefa manomboka mandrahona ho an'ny vondrom-piarahamonina toa azy ity Avy amin'ny Linux? Eny, izany no mahatonga ny admin toa ahy tsy hiahiahy intsony amin'ny maha-mpandraharaha bastards tsotra ahy tsy ho any amin'ny afobe ary manontany ny hoavin'ny fiarahamonina niarahan'izy ireo niasa.
Fanamarihana: io no hevitro, tsy mbola niresaka momba ireo mpitarika roa ambiny ao amin'ny mikasa ny handray an'izao tontolo izao tetikasa Avy amin'ny Linux ka fadio ny maminavina na te ho futurologist, izay mifanaraka amin'ny ¬¬ ko
Na izany na tsy izany, ny tiako holazaina dia tato ho ato izay no nahitako ny fitomboan'ny vondrom-piarahamonina saika henjana Avy amin'ny Linux amin'ny G +, ary lazaiko fa tototry ny fari-piainan'ny fiarahamonina, raha raisina an-tsaina fa tao amin'ny forum ho an'ny fiarahamonina dia zara raha azontsika 624 ny mpikambana voasoratra anarana ary efa ho herintaona ny forum, raha ao amin'ny fiarahamonina G + misy antsika 852 ny mpikambana ao anatin'ny… roa herinandro? Ary izany dia mahatonga ahy hieritreritra zavatra maro.
Mazava ny forum, ny vondrom-piarahamonina efa nihinana azy tamin'ny lafiny rehetra, ary maharary ahy ny miteny azy saingy miharihary fa mavitrika kokoa sy mora entina hatraiza hatraiza ny vondrom-piarahamonina (ohatra ny fampiharana Android) ary mamela fiasa maro hafa toa toy ny HangOuts na ny fisehoan-javatra, ny hevitra, ny +1, ary ny fampiraisana marobe amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy fa misy fatiantoka izany ary mazava ny iray amin'izany, mamono be dia be ny fanarahana kofehin-dresaka, ary aza miteny amiko raha tsy izany, satria manelingelina ahy ny tsy maintsy ahodinkodinako be loatra ny resaka na hikarohana azy ireo tsara amin'ny sokajy nefa tsy misy sivana sy entana. Tsy manana fitaovana toa ny kaody BB ihany koa izy io, izay tena tsara tarehy rehefa te-handrafitra lahatsoratra misy zavatra avy amin'ny lisitra ka hatramin'ny kaody.
Fa ny tambajotra sosialy dia hisy fiatraikany lehibe kokoa hatrany, tsy azo lavina izy io, ary hitako tsy amin'ny isa ihany fa miaraka amin'ireo mpampiasa mavitrika ao amin'ny forum sy ny fihenan'ny famoahana azy, izay efa ambany Tsy ampy taona izy ireo izao ... zavatra sarotra io ary indraindray mampieritreritra ahy; Ahoana raha misy fiatraikany amin'ny bilaogy? Zavatra efa nolazain'ny maro tamiko ary ny marina dia tsy afaka manome toky aho fa misy fiantraikany mivantana amin'ny bilaogy izany, na dia tsy afaka miavonavona aza aho ary mamela ny ekipa hiala sasatra amin'ny asany, saingy azoko lazaina fa sosona roa tena samy hafa izy ireo, ny bilaogy sy ny fiarahamonina. / forum dia tsy misy ifandraisany amin'ny sehatra ara-drafitra ary tsy miankina amin'izy samy izy, ny zavatra ao anatin'ilay fiarahamonina dia afaka manao lahatsoratra tena malalaka sy tena tsara ianao, saingy miahiahy aho fa ny fanesorana ny ivon'ny bilaogy dia tsotra fotsiny aho Tsy misy teboka fampitahana… nefa.
Mikasika ny forum, zavatra telo fotsiny no azoko eritreretina:
Akatona ny forum ary avelao ho an'ny fiarahamonina ny andraikitra lehibe rehetra.
Manakatona ny fiarahamonina ary avelao ny andraikitra voalohany amin'ny forum.
Famerenana sy famolavolana ny forum iray manontolo mba hahatonga azy io ho manintona ny mpampiasa tokoa.
Ary eto no tiako haleha miaraka amin'izany rehetra izany, ho ahy dia tsy zava-dratsy ny fananana ireo fitaovana ireo amin'ny tambajotra sosialy, ho ahy dia toa sabatra roa lela izay tsy maintsy hainao ny mampiasa azy satria ny tsindry ataon'ny iray no manosika antsika hanatsara ny iray hafa. Mila zavatra maro ny forum; famolavolana indray hanana tena maha-izy azy, endrika mamaly sy maivana izay mamela ny mpampiasa hitondra ny forum amin'ny toerana rehetra, hanatsara ny fitaovana fanovana mba hahafahan'izy ireo mampiasa tsara amin'ny fitaovana rehetra (mikasika na birao / laptop) fampidirana kaonty tokana (OpenID / Mozilla Persona) ary ny fanatsarana ny fampiasana ny interface ... izay hahatonga ny forum ho fitaovana manintona kokoa hampiasaina Mendrika ny hatsaraina ve ny iray amin'ireo serivisintsika hifaninanana, amin'ny ironika, iray hafa amin'ny serivisintsika? tsy maintsy apetraka ihany koa izany fanontaniana izany ary jereo izay tena zava-dehibe amin'ny fiarahamonina; Raha ny fampiononana sy fampidirana nomen'ny G + (amin'ny vidiny tsy maintsy miraikitra amin'ny Google) na ny lalan'ny Ataovy izany saingy sarotra kokoa ary tsy dia ekena loatra ny forum (ary ahafahantsika mitazona ny fifehezana ny hetsika sy ny angon-drakitra).
Ny tena marina dia ny kely sisa tsy maintsy ataontsika dia tsy kely fotsiny, tena tsy adala izany ary mila mipetraka isika ary miady hevitra amin'ny hery. Tokony hatao amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra ny zava-drehetra, tsy te-hanaparitaka ny adihevitra eo amin'ny forum, ny bilaogy ary ny vondrom-piarahamonina aho, te hanana ny zava-drehetra amin'ny sehatra tsy miandany ary afaka tena miady hevitra, afaka mahazo topimaso tsara kokoa ary mety hamorona hetsika drafitra. Marihina fa ny hetsika rehetra mety horaisina momba ity olana ity dia tsy ho eo noho eo na tsy misy vita fotsiny, io no fandraisana andraikitra nataoko ary tsy manam-potoana sy fahalalana aho hanaovana zavatra haingana, ary koa ny loharano sy ny fotoana. ny fizotry ny fanapaha-kevitra iray manontolo, bla bla bla ...
Manomboka izao dia anjaranao ny miady hevitra momba ny raharaha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » G +, vondrom-piarahamonina, bilaogy ary ... zavatra hafa.
Ela be aho tsy namaky azy io, avy eo novakiako milamina kokoa ... Te hiditra fotsiny aho ary hampiseho ny Mpampiasa ahy xD ejejeje
Mino aho fa raha mavitrika kokoa ny fiarahamonina dia ilaina ny mifantoka amin'izany. Mazava ho azy fa mavesatra ny miraikitra amin'ny Google rehefa tsy izy no fitaovana mety indrindra amin'izany, fa ny sangisangy dia ny hitaona ny fiarahamonina hizara fahalalana sy izany.
Maharary izany, saingy tsy maintsy miandry olon-kafa ho avy ianao handrava ireo tambajotra voafetra ireo ankehitriny.
Tirso dia hoy izy:
Tsy voafetra ny tambajotra, voafetra ny mpampiasa ary ny mpampiasa fotsiny no mahaliana azy ireo ary manindry ny doka ihany izy ireo hehe.
Marina anefa ny hevitrao.
Heveriko fa ny fitaovana roa (ny bilaogy sy ny vondrom-piarahamonina G +) dia tokony hifameno. Ny bilaogy ho an'ny lahatsoratra lava, lahatsoratra misy hevitra, ny How-To's, ary izany karazana zavatra izany, sy ny vondrom-piarahamonina hanaovana fakan-kevitra, lahateny ivelan'ny lohahevitra ary zavatra tsy ara-potoana hafa, mba tsy hanodinkodinana.
Ny tombotsoan'ny G + dia mazoto kokoa, ary toa izany no mahasarika kokoa azy, na dia mbola hita ihany aza raha tsy lamaody tsotra fotsiny, zavatra vetivety. Hilaza ny fotoana (raha tsy mifarana izao tontolo izao anio, haha).
Hahaha Heveriko fa tsy ho rava ity, raha ny tena izy, ny admin sy ny tonian-dahatsoratra dia tsy hanoratra lahatsoratra iray manontolo momba ny fametrahana Archlinux na Slackware amin'ny habaka G +, mijanona eto aho. Mahita ny fiasan'ny forum aho, satria afaka mamoaka amin'ny antsipiriany kokoa ny hevitr'izy ireo momba ny lohahevitra iray, na ho an'ny paositra mialoha, ary ny G + dia ho an'ny fifandraisana tsy ara-potoana fotsiny. Izaho manokana dia mieritreritra fa mahamenatra (sy lesoka) ny mamafa ny fanakatonana ny forum. Efa nanana lahatsoratra sahala amin'ity nomanina ity aho, fotoana fohy fotsiny io. Raha fintinina: manatsara kely ny forum, na dia mety maty aza aho XD.
Fanitsiana: akatony ny forum.
PS: Heveriko fa tsy maintsy zaraina amin'ny G + ity lahatsoratra ity, mba hahafahan'ny tsirairay maneho hevitra.
Hitako am-pahatsorana ho toy ny ady resy ny toe-draharaha forum, na dia mankarary G + aza dia mitondra tombony bebe kokoa noho ny fatiantoka, na tiantsika izany na tsia.
Amin'izao fotoana izao, ny «adapt na die» dia marihina tokoa, ary ny tsy fivadihan'ny fiaraha-monina <° dia tsy hanjavona, hivoatra izy io, ka tsy hitako ny raharaha hoe milomano manohitra ny ankehitriny, heveriko fa tsara kokoa ny mamela mandehana am-pahendrena 😉
Tsy mitovy ny hevitrao. Fa maninona Noho ny antony tsotra. Ny forum dia manana fikambanana tsara kokoa amin'ny resaka fampahalalana, ary raha te hitady zavatra ianao dia manana ny lohahevitra / sokajy ary ny hafa voalamina tsara. Rehefa misy mamoaka amin'ny G + dia tsara daholo ny zava-drehetra satria ny mpikambana rehetra mahita ny fanontaniana ary mamaly , fa afaka andro na volana vitsivitsy Aiza izany lahatsoratra izany? Ahoana raha te hanontany azy indray aho? Tsy haiko, hitako ho sarotra sy miadana kokoa noho ny forum ilay izy.
Bro, ny hevitray amin'ny lafiny azo ampiharina, dia hanana ny lanjan'ny komina, amin'ny farany handresy ny fampiharana.
Tongava antitra, sarotra ny mampifanaraka ny fanovana, saingy tsy maintsy atao izany ary arakaraka ny ahavitanao azy no tsara kokoa.
Marina ny voalazan'ny lehilahy sola, tsy dia hoe mampifanaraka loatra fa ny mahita ny mety isian'ny serivisy tsirairay, tsy mora izany fa eo ihany.
Marina izany, marina ny anao, voalamina kokoa ny forum, bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa vaovao, manana fidirana marobe marobe ho mpizahatany aho ary nanampy ahy hianatra izany, araka ny nolazain'ny raibeko, fa maninona no mamorona ny kodiarana boribory?
Ity habaka ity dia mahafinaritra tokoa hianarana ary fantatro fa misy olona toa ahy izay tsy dia be loatra ny mandefa NEFA mamaky ireo fampianarana hamaha olana izy ireo.
Tohizo miaraka amin'ny Blog !!
Izahay dia mampitaha zavatra izay tsy azo ampitahaina. Google+ dia tambajotra sosialy ary zavatra hafa ny forum.
Alejandro Troncoso dia hoy izy:
Angamba amin'ny ho avy G + dia ho forum ho an'ny vondrom-piarahamonina, fa araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratra amin'izao fotoana izao, mitady zavatra ao amin'ny G + dia adala, ankoatry ny tsy fandaminana izay misy ny zavatra mifangaro rehetra.
Ilaina ny mitazona ireo tontolo iainana roa ary mahita hoe iza no tsara kokoa amin'ny asa ilaintsika.
Mamaly an'i alejandro Troncoso
Rehefa avy namaky ny lahatsoratrao aho dia mahatsiaro tena ho meloka satria tsy nisoratra anarana tao amin'ny forum, fa misy antony! (Manana "antony" foana isika, sa tsy izany?) Dia ny forum iray no mampiankin-doha ahy (mampalahelo fa fantatro tamin'ny lasa), indrindra fa amin'izao andro fialan-tsasatra izao ...... mieritreritra ilay mahazatra an'ny Nipoitra ny G + ary nipoaka .... Ny ezaka rehetra ataoko mba hialana sasatra amin'ny fialan-tsasatra dia very ao amin'ny G +, noho izany, eny, mavitrika kokoa ny vondrom-piarahamonina G +, nefa miaraka amin'izay dia miserana ihany ny fisian'ireo mpampiasa, hoy aho: manao antso amin'ny G + hiditra ny forum (oh oh ironie!), efa nanatevin-daharana aho, ka lazao amin'ny mpampiasa xDD iray hafa, koa ny forum dia zavatra iraisana sy manokana kokoa, hoy aho ... tsy haiko, nefa manantena aho fa tsy hanjavona izany: /
Kaominaly ... nataon'Andriamanitra tsy miteny an'izany, lazao ny kaominaly xD
Hahahaha ok…. fiarahamonina…. inona no tadiavinao? ny nofy dia nanimba ahy 😛
Nano man nilaza fa ny tambajotra sosialy G + dia mety handrahona ny fiarahamonina <°, hiteny aho fa tena tsara izany, ny fampiasana sy ny habaka dia samy hafa tanteraka satria bilaogin'ny vaovao / fampianarana ity, G + dia zavatra tsy ara-dalàna kokoa .
Etsy ankilany, ahoana raha hitako ny antony iray dia ny hoe angamba tsy misy dikany ny forum, na dia mino aza ny olona iray fa ilaina kokoa ny fanarahana ny fanontaniany sy ny olana dia tsy dia miasa intsony izy io ary ao amin'ny fiarahamonina Google satria misy zavatra sasany azo vahana tsara kokoa, saingy mbola mieritreritra aho fa ilaina izany satria zaraiko ny hevitrareo fa tena fanaintainana ny fanarahana ireo kofehy ho an'ireo lohahevitra toa ireto.
Mino aho fa ny pejy ao amin'ny G + mety ho mora kokoa hamahana ny fisalasalana noho ny forum, satria farafaharatsiny amin'ny zavatra niainako manokana dia mijery ny fanontaniana mandritra ny iray andro farafahakeliny izy ireo ary avy eo dia manjary tsy azo ihodivirana na dia hadinony aza tsy voavaha ny fanontaniana (manana fanontaniana 3 napetraka tao aho ary iray ihany no voavaha, izay novaliako ny tenako)
Ao amin'ny G + dia valiany haingana ianao, fa raha tsy valiany ao anatin'ny fotoana fohy io fanontaniana io dia very ao an-dranon'ny fanontaniana hafa izy ary zavatra tsy tiako izany.
Marina. Na dia tsy handratra aza ny handamina ny forum amin'ny fomba hafa kely mba tsy hitrangan'izany, rahateo, zavatra tsy afaka atao amin'ny G + izany.
Toy izany koa no nitranga tamiko. Nanana olana vitsivitsy aho ary nanapa-kevitra ny hanontany azy ireo ao amin'ny forum (heveriko fa nanao fangatahana / fangatahana fanampiana 3 aho) ary tamin'ny farany dia nivaly ny tenako ary namoaka ny vahaolana, raha sanatria misy mila izany amin'ny fotoana iray.
Ankehitriny, miresaka momba ny G +, ho ahy dia mieritreritra aho fa niditra teo amin'ny fiarahamonina <° aho taloha. Misy zavatra tsy tiako amin'izany, fa tsy ny fomba famaritana azy. Mahatsiaro ho mahazo aina kokoa aho ato amin'ny forum noho ny zavatra manan-danja, ary ny G + miresaka sy zavatra toa izany ...
Nahazatra ahy ny nampiasa forum, toy ny taloha, fa ilay avy amin'ny <° dia maty efa ho faty 🙁
Ny famoronana vondrom-piarahamonina ao amin'ny G + dia toy ny fananganana amin'ny tany nohofana, tsy misy toa ny fiarovana ny fanananao ny fampahalalana amin'ny serveranao
Novakiako ireo lahatsoratra, saingy mbola tsy niditra tao amin'ny forum akory aho, tamim-pahatsorana rehefa manana olana amin'ny zavatra tadiaviko mivantana ao amin'ny Google aho ary mifikitra amin'izay niavian'ny vahaolana.
Ny zavatra tsara momba ny maha-ao amin'ny forum dia ny fisehony ao amin'ny motera fikarohana, tsy fantatro hoe manao ahoana izany amin'ny zavatra navoaka tao amin'ny G +.
Fanampin'izany, amin'ny fialàn'ireo Kaomina ao amin'ny G +, tsy hitako ny antony fananana Pejy sy vondrom-piarahamonina iray miaraka amin'ny G +. Navelako tao amin'ny G + ny Blog sy ny Community (mba hahafahanao mampihena ny fantsom-pifandraisana mankany amin'ilay pejy).
Misoratra anarana amin'ny Blog, Forum, G + ary Twitter aho. Tiako ny DesdeLinux, noho ny maha-vondrom-piarahamonina misy anao ((tsy bilaogy na forum fotsiny izy io, fa iray ihany). Tena mangataka aminao aho mba tsy hanesoranao ny fampahalalana amin'ny forum, satria ny tena izy dia ny G + dia toy ny resaka fotsiny. Tsy azo ampiharina amin'ny G + ny manome vahaolana sarotra amin'ny olana, raha toa ka tsy ho hitan'ny ankamaroan'izao tontolo izao ireny vahaolana ireny amin'ny ho avy.
Ho famaranana, izany no hevitro, ny forum dia toerana anaovana fanontaniana sy valiny ho azon'ny rehetra amin'ny ho avy, raha ny G + kosa dia valiny manokana, izay tsy ho hita intsony amin'ny ho avy. Ka na dia miahiahy izany aza izy ireo dia samy manana ny asany hafa.
Fa inona ny statistika?
Ny vondrona FB
Ny vondrona G +
Tokony hojerentsika izany. +1 Cristopher Castro.
Raha ny fahitako azy, tsy mitovy ny fampiasana sy ny mety, ny G + dia akaiky kokoa ny fifanakalozana saingy tsy misy ny halalin'ny vahaolana amin'ny bilaogy, na dia misy ampahany amin'ireo mpampiasa mandray anjara aza, mieritreritra aho fa ao amin'ny G + Hisy maro an'isa zatra an'io karazana habaka io, betsaka noho ny fisian'ny "foko" iray noho izy ireo mpikambana ao amin'ny vondron'olona mampiasa loharanom-baovao, mizara ny foto-kevitr'izy ireo ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana sy ny "fitoriana filazantsara" izay angoniny matetika. amin'ny mpikambana bilaogy. Na izany na tsy izany, heveriko fa ireo tetik'asa roa ireo dia tokony hotanterahina, nefa tsy ilaozana koa, ary mampiasa G + hahazoana fahitana bebe kokoa amin'ireo tsy natomboka tao amin'ny GNU / Linux.
Woooww !! Vaovao inona !!
Eny, zava-dehibe ny angona omenao Nano, fa amiko dia mety ho lesoka ny fanesorana ilay forum, izay mbola tsy nojereko mihitsy. Mpampiasa an'ny DesdeLinux aho, novakiako in-1 na in-2 isan'andro, rehefa nivoaka ireo mailaka tonga tamin'ny mailaka ary manaraka ny hevitry ny seranana izay mahaliana ahy indrindra. Nanatevin-daharana ny vondrom-piarahamonina G + aho, ny ankamaroany dia nandray anjara tamin'ny DesdeLinux, saingy rehefa afaka 2 andro ny G + Spam dia avelao ny fampandrenesana ary jereo aho, mbola eto aho. Tsy misy manohitra ny G + satria raha ny marina dia tiako hivondrona ho ... toy ny ... mmm .... "Toy izay tsy maintsy atambatra"
Ho ahy "(hazavaiko ny fomba anaovanao azy), ny fanankinana ny G + amin'ny fikirakirana ny fampahalalana ao amin'ny forum dia toy ny fangatahana arisiva hitondrana ny kaontinao, ary ho hitako fa tiako ny ataon'ny G +, fa G + kosa efa niovaova rehefa mila mahita ny tranokalanao eny an-tsena. Nilaza i Google fa tsy tambajotra sosialy izy ireo, vao haingana no naka ny olan'ny vondrom-piarahamonina izy ireo, fa raha manontany ahy ianao, na ireo ao Mountain View aza tsy mahalala izay lalana halehan'ny G +. Ahoana raha rehefa afaka kelikely, dia tsy mandeha izy io ary manjavona toy ny serivisy marobe napetrany ary tsy ho izay notadiaviny velively. Izy ireo angamba ary avy eo dia manasaraka ny fihantona sy ny serivisy hafa, saingy mila mamerina ny fampahalalana G + rehetra "mandeha" ve isika ary manangana forum vaovao? ary azo antoka fa amin'ity fampianarana ity dia ho very ny fampahalalana sarobidy sy ny fandraisana anjara. Mino aho fa mbola eo anelanelan'ny fahazazany ny G + ary tsy maintsy miandry azy ho matotra isika, mahita ny toerany eny an-tsena, milamina ary avy eo mahita ireo fomba hafa natolony
Taloha lasa izay, tao amin'ny lahatsoratra iray izay nananan'ny DesdeLinux ny fomba hanatsarana ny bilaogy (ary tokony hanana fomba hanafarana sy hitantanana ny fampiasana atiny, kokoa amin'ny fomba fijerin'ny mpampiasa) aho, ary mieritreritra zavatra iray aho toy izany no mitranga ao amin'ny forum, indraindray ny filaharana sy ny katalaogin'ny atiny dia somary tsy azo antoka, ary ny fampahalalana dia very an-dranomasina misy kofehy ao amin'ny forum (eny, alao sary an-tsaina fotsiny izao izay hitranga amin'ny G +). Ho ahy dia tsy maintsy mitady fivoarana ny forum na hanjavona (izany hoe, Darwin, fivoarana, fitenenana), na inona na inona fanatsarana azy ireo, dia mitovy amin'ny forum voalohany ... tsara, ivelan'ny fanatsarana, ahoana no niovany? Ary eto angamba (ary manala tsiny ny fahasahisahiana) dia tokony hijery izay nahatonga an'i Richmond nalaza -> mora, mora raisina, tsara (izay toa adinon'izy ireo ihany). Ary manatsara azy ireo amin'ny hevitra sy tolo-kevitr'ireo olona mandray anjara eto.
Nanana fotoana kelikely aho fa tsy niditra tao amin'ny G + ary ankehitriny dia nandalo niaraka tamin'ireo vondrom-piarahamonina vao tsy ela akory izay, ny fiovana nitranga izay tsy tiako, ary koa, tsy fantatro akory hoe aiza ny safidiko, very ny tenako tamin'ny zavatra rehetra. Nasehoko tamin'izy ireo niditra ... ary aleoko miverina milalao GWO ary miala amin'ny andro hafa hanokanana ny tenako hijerena izay atolotra antsika ankehitriny ... na tsara kokoa, tsy mianatra na inona na inona momba izay ananany izao , satria azo antoka fa hisy fiovana hafa ary aleo aho hihalalina rehefa tonga aho.
eny, efa niely be aho. Tena mahaliana ity kofehy ity, satria miresaka momba ny làlana arahinay amin'ny maha mpampiasa anay sy ny olan'ny mpitantana izahay. Hanohy hifandray aminao aho ary hitandrina sy hanohana ireo fanapahan-kevitra raisina. Misaotra an'i DesdeLinux.
(Azafady azafady ny fampiasana Windows, saingy milalao GodsWar aho, ary tsy vitako ny nilalao azy tao amin'ny divay ary tsy manana habaka kapila aho hananganana virtoaly iExplorer)
Hanampy aho fa heveriko fa afaka mampiasa kaonty Google ho an'ny FromLinux ianao, handefasana ny tutorial sy ny HowTO amin'ny PDF, hahafahanao mijery an-tserasera, misintona azy ireo ary manangana tranomboky, ary koa rakitra mitahiry tianao zaraina (Conky , Configurations OpenBOX, ankoatry ny hafa), Picasa hampiantrano ny sary sokitra ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny Hangouts ho an'ny olona izay maniry ny fivorian'ny video. Ao anaty kaonty iray daholo. Saingy eto raha, izay lazain'ny mpitantana.
Ny momba ny famafana ny forum dia fandinihana adala fotsiny, tsy nilaza mihitsy aho hoe zavatra nokasaina hatao io, fa ahy fotsiny io.
Mikasika ny fampidirana ny DesdeLinux amin'ireo serivisy hafa toy ny picasa, drive, kaonty google ... ireto no zavatra tokony tanisaina, ifanakalozan-kevitra tsirairay, jereo ny fomba azo ampifandraisina ary, ambonin'izany rehetra izany, fantaro raha manafika ny fitsipiky ny ny vondrom-piarahamoninay na raha ho azy ireo.
Ary natolotro ny serivisy fantatro, angamba ary mety ho resaka fampiasana hafa ... Flirk (na inona no iantsoana azy), na safidy malalaka ... tsy haiko, izany no antony nilazako fa raha "izay lazain'ny mpitantana", Ny tena marina dia tsy tonga tato amiko ny fitsipiky ny fiarahamonina, saingy mihaino izany ianao, misaotra tamin'ny fandinihanao ...
Ary ny an'ny, tsara ve izany fa ny eritreritrao adala fotsiny, Hahaha! Ary ratsy loatra fa isika rehetra dia efa nanangana ny Ady lelafo ho an'ny "fanidiana tsy azo ihodivirana" Hahaha! XD
Miala tsiny fa tsy namaky tsara 😛
Ny marina dia mahita ireo vondrom-piarahamonina ho toy ny forum aho, fa ny zavatra tsara indrindra dia ny hitantanana 20 amin'ireo forum ireo amin'ny tranokala tokana, avelao afovoany izany fa tsy mila mankany amin'ny tranokala X na Y vao mahita ny vaovao.
Tsy azo lavina fa ny tambajotra sosialy dia nanolo izay taloha dia ireo forum internet mahafinaritra ary tsy isalasalana fa tonga hijanona izy ireo
Nanatevin-daharana ny G + aho ary raha ny marina dia tsy mahita fomba hanaovana an'io aho, an-tapitrisany tsara kokoa ny bilaogy sy ny forum.
Heveriko fa tsy hidina amin'ny inona na inona ny bilaogy. Toy izany koa no nitranga tamiko tamin'ny bilaogiko, na dia tsy misy ifandraisany amin'ny teknolojia aza izany, ho an'ny tena manokana izany ary manodidina ny 160 ny mpanaraka ahy. Na izany aza, ny kaontiko noforoniko tao amin'ny Facebook dia misy mpanaraka bebe kokoa. Mazava ny antony: misy mpampiasa manana kaonty Facebook betsaka kokoa noho ny Blogger izay manaraka ny bilaogiko. Raha mijery ny fitsidihana tsy maintsy ananan'izy ireo ato amin'ity bilaogy ity izy ireo dia tokony ho ambony lavitra noho ireo mpanaraka azy ireo satria hanohy hitsidika ny bilaogy ny olona na inona na inona hitranga. Ny bilaogy no pejy malalanao, ny ambiny dia fanitarana izay ifandraisan'ny mpampiasa ary, noho izany, hanana mpanaraka marobe amin'ireo toerana hafa toa an'i G + ireo izy ireo.
Raha ny forum ... ny olana lehibe nananan'ny forum hatrizay dia ny tsy maintsy hamoronana kaonty (amin'ny forum maro dia toy izany) hahafahanao miditra sy mandray anjara ary tsy omeny anao ny safidy hidirana amin'ny kaonty google na zavatra toa izany. Ny mpampiasa iraisana dia mitady fampiononana ary tsy te-hamorona kaonty 20 amin'ny forum 20 samy hafa handray anjara amin'ny tsirairay amin'izy ireo; te hanatsotra ny fisiany izy ireo ary, noho izany, misafidy ny hikaroka pejy amin'ny Facebook mifandraika amin'ny lohahevitra na amin'ny tambajotra sosialy. Ary koa, raha hiditra amin'ny forum dia tsy maintsy atao amin'ny PC ianao ary tsy dia manam-potoana firy amin'izany. Ny vondrom-piarahamoninao ao amin'ny G + dia nitombo ary alefako aminao ny zavatra rehetra noho ireo mpampiasa izay mifandray amin'ny alàlan'ny finday, mihoatra ny zava-drehetra. MAHORITRA ny tsy maintsy hijerena ny fampandrenesana tsirairay ary hoy ianao: "Tsy hiditra hamaky na inona na inona aho," nefa lasa miditra… miaraka amin'izay, izany no hakanton'ny vondrom-piarahamonina G +.
Na izany na tsy izany, tsy manam-pahaizana amin'ny zavatra rehetra aho fa io no azoko eritreretina momba izany rehetra izany.
[Toy] & [+1]
Nisoratana anarana ao amin'ny G + aho ary navelako satria nanantena ny hisolo ny Facebook aho, saingy fantatrao fa tsy miankina aminay ihany izany fa amin'ny fifandraisantsika ihany koa, ka fantatro izany fa tsy ampiasaiko.
Etsy ankilany, voasoratra anarana ao amin'ny forum aho, manaraka ny vaovao avy amin'ny twitter aho ary ity no fandraisako anjara voalohany amin'ny bilaogy, na dia nihaona taminao aza aho noho ny fisaorana azy.
Avy amin'ny toerako tsy mandray anjara (manantena ny hanova an'io aho) heveriko fa fahadisoana ny mandroaka ny forum, satria ny fikambanana lehibe kokoa dia mety ho an'ny vondrom-piarahamonina manana toetra teknika. Ny Wiki ihany no zavatra azo alamina tsara kokoa, saingy hahafoana ny lafiny sosialy sy ny mety hiadian-kevitra.
Mikasika ny hanohizako na tsia amin'ny G + dia tsy miditra intsony aho, satria tsy hitako ny fomba hitondranao azy any, fa ny Twitter kosa dia mpisolo toerana mampahazo ny RSS mahazatra.
Araka ny eritreritro sy ampiasaiko, mino aho fa ny bilaogy no ivon'ity vondrom-piarahamonina lehibe ity raha ny vaovao, tsy misy andro tsy hamakiako ny lahatsoratr'izy ireo .. .. etsy ankilany tsy mpampiasa tambajotra sosialy aho (jereo G + , boky, vorona, sns) .. ary na dia voasoratra anarana ao amin'ny forum aza aho, ny famakiako azy dia isan-kerinandro isan-kerinandro mifanohitra amin'ireo famerenako ny bilaogy, na ho an'ny lahatsoratra vaovao na taloha ..
Ny soso-kevitro dia izao manaraka izao, mino aho fa ilaina ny fizarazarana raha ny valiny ao amin'ireo lahatsoratra ao anaty bilaogy, izay mizara roa mitovy amin'ny valiny, dia ataovy hoe 'tsotra' (toa ny arahaba, fanohanana, famerenana sns) ary ireo 'be pitsiny' (satria mety hanakiana izy ireo izay manome valiny marobe, mangataka fanampiana rehefa tsy afaka mamorona zavatra amin'ny asa mitovy, sy ny mitovy aminy).
Miala tsiny amin'ny halavany ... ary toy ny mahazatra, misaotra betsaka noho ny nahatongavanao teto ho anay rehetra, ary izahay ho anao amin'ity toerana lehibe omenao anay ity ... sy ny fanatsarana sy ny faniriana tsy tapaka napetrakao tao ...
Fantatro fa nanana Forum ianao, fa ny tena marina dia heveriko fa tsy mbola nahita an'io aho.
Misaotra an'ity lahatsoratra ity dia napetrakao amin'ny takelakao izany.
Soloy ny G + amin'ny Forum…? Ara-dalàna ny mieritreritra azy io sy manova azy, fa ny fikambanana afaka manome anao forum kosa tsy manome anao G +.
Ary ho an'ny firaketana an-tsoratra, tsy mpampiasa mavitrika amin'ny Forum aho, angamba hamporisihinao aho 😉
Nivoaka ny beta ho an'ny daholobe ho an'ny Linux